I-WholeSAle Lithium Pallet Jack, I-Lithium yoMbane Plaller | I-staxx
Izandla zePallet Trucks
Incwadana yemigaqo ye-SEMi
Sineqela lentengiso elithengisayo
Sineqela lenkonzo yasemva kwentengiso emva kwentengiso
Sineqela lolawulo lobuchule
Sineqela le-R & D
Sineqela lemveliso yobuchule
Emva kwe-SOP ye-SOP
Isisombululo esinye sokumisa kwi-lithium pallet yelori yezixhobo zokuphatha.
lwe Lithium-ion pallet jack mveliso
lwe Lithium-ion Umthengisi pallet jack
Staxx Lithium Pallet Truck eziluncedo:
1 Thina lithium pallet iqela leengcali ukuthengiswa jack
2 Sinento iqela inkonzo Professional emva-ukuthengiswa
3 Thina iqela lolawulo Professional
4 sibe Professional R&iqela D
5 Sinento lithium lokuvelisa iqela pallet truck Professional
Iqela Staxx unamava esisityebi kuyilo mveliso, apho ngokupheleleyo ukuhlangabezana neemfuno wena lwabathengi. Kwakhona uyakwazi ukunika izisombululo wena kubathengi.
Staxx lithium pallet jack bayakwazi loyilo, uphuhliso kunye nemveliso.
Qonda iimfuno kanye ekupheleni-abasebenzisi kurhwebo jack Lithium pallet.
Le shedyuli ezikolweni kunye behlola linikeza amaqabane ethu Lithium electric pallet yoqinisekiso lomgangatho isigadla.
Yentsebenziswano phakathi iinkonzo kunye Staxx lithium pallet truck ungenziwa ngemfuneko.
Lithium PALLET Truck IMVELISO
Nika lithium pallet jack, Lithium truck pallet yombane
I-China Ess Eription Priple Stakers Stakers ye-Stack - i-staxx
I-Staxx China Ess Eriple Stakers Stakers ye-Stack - Sineqela lentengiso lobuchule.
Eyona nto ilungileyo ye-frecker yombane ye-stacker yexabiso elifanelekileyo - i-staxx
I-Staxx ihamba phambili ye-Stacker Stacker Precker Procker Ixabiso le-Insodd Ixabiso le-Stacker-Ixabiso eliphakathi kwabathengi kunye ne-staxx inokwenziwa ngokwezifiso. Singathanda ukuhambisa inkxaso yethu, njengesicwangciso sokuthengisa, inkonzo yasemva kwentengiso kwiimfuno zamaqabane ethu.
I-WS eyenziweyo ye-WS eSebenzayo ye-WS
I-STEXX I-WS eSebenzayo se-WS STripries Staction Abavelisi bombane base China, itekhnoloji engundoqo yeeTruck zoMbane yiyunithi yamandla yiyunithi yamandla, kubandakanya nemoto / isalathiso kunye nebhetri. I-staxx inamandla okuyilwa ngokuzimeleyo, ukuphuhlisa nokuvelisa iinxalenye eziphambili, kwaye kukhokelele ekuphuhliseni itekhnoloji ye-48v iqaqanjelwa. Itekhnoloji ivavanywe kwaye iqinisekisiwe yi-TÜV Rheincland ngovavanyo olunye.
Eyona nto iphambili kumgangatho we-MRS right fin
I-STEXX Elona ftware le-MRS ifikelela kumzi-mveliso we-stacker, sineqela lentengiso lobuchule.
MALUNGA US - Staxx pallet profile truck
lithium Professional truck pallet izixhobo yokugcina umenzi
Ekubeni ngokuhlanganisa inkampani ngo-2012, Staxx lithium pallet ngelori wangena ngokusesikweni kwicandelo lemveliso nasekusasazeni lwezixhobo yokugcina, ezifana lithium pallet jack, lithium pallet iilori, lithium zombane pallet isigadla. Ngowe-2016, inkampani ebhalisiweyo brand new "Staxx".
Ngokusekelwe self owned mveliso, iimveliso, ubuchwepheshe kunye nenkqubo yolawulo, Staxx kuye kwasekwa inkqubo kumthengisi epheleleyo, waza wadala umntu-isingxi Ukubonelela eqongeni, kunye abathengisi kwama-500 apha ekhaya nakumazwe aphesheya.
STAXX WENKAMPANI UKUSEKWA
ABASEBENZI STAXX Lithium PALLET Truck INKAMPANI
kahle eliphezulu& UMGANGATHO OPHEZULU
I-Staxx Pallet Traint ye-wiring inesifo sokuqina kunye novavanyo lokuthembeka
Ukuqina kwe-wiring kunye nokuvavanywa ngokuthembeka
I-pallet yelori iphatha uvavanyo lokuhambahamba
Qinisekisa ubuchule be-anti-seismic kunye nokuthembeka kwesiphatho.check kwaye ufunde ngakumbi malunga ne-staxx pallet yelori yelori
I-Staxx Pallet Countraller&Uvavanyo lokwaluphala lwe-LED
I-Staxx Pallet Countraller& I-LCD ye-LCD yovavanyo olulupheleyo, jonga ividiyo kwaye ufunde ngakumbi!
I-Staxx Pallet Track Thutraulic phakamisa uVavanyo lweNkqubo
I-Staxx Pallet Track Itrakhi yovavanyo lwenkqubo yokuvavanywa kwenkqubo, Makhe sijonge ividiyo kwaye sifunde ngakumbi!
Nihambe EMAIL okanye inombolo yefowuni kwifom UQHAGAMSHELWANO Ngoko bakukhonze!
Ilungelo lokushicilela © 2021 Ningbo Staxx Izixhobo zokuphatha izixhobo ze-CO